Freedom For Burma: ၂၀၁၁ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထူးခြားဆုံး ဖြစ်စဉ် ၁၁ ခု ကိုစုစည်းဖော်ပြခြင်း
၂၀၁၁ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထူးခြားဆုံး ဖြစ်စဉ် ၁၁ ခု ကိုစုစည်းဖော်ပြခြင်း
၂၀၁၁ နှစ်ဆန်း ဇန်န၀ါရီ (၁) ရက်နေ့မှစတင်ကာ နှစ်ကုန် ဒီဇင်ဘာ (၃၁) ရက်နေ့အထိ တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထူးထူးခြားခြား ပြောင်းလဲခဲ့သောဖြစ်စဉ်များကို ယူနီဗာဆယ်၏ မိတ်ဆွေများ၊ PHD ဘွဲ့ရများ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားမှ အတွေ့အကြုံရှိသူများ၊ ကျောင်းဆရာများ ၀ိုင်းဝန်းအကြုံပြု၍ ၂၀၁၁ အတွင်း မြန်မာပြည် ပြည်သူလူထုအပေါ် အကျိူးသက်ရောက်စေသော ဖြစ်ရပ် (၁၁) ခုကို စုစည်းကာ တင်ပြလိုက်ပါသည်။
(၁) ပြီးပြည့်စုံသော လွှတ်တော်တစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာခြင်း
မတ်လ (၃၀) ရက်နေ့တွင်နှစ်ပေါင်း (၂၀) ကျော်ကြာ အုပ်ချူပ်ခဲ့သည့် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီကို အပြီးတိုင် ဖျက်သိမ်းပြီး ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချူပ်ရေး နှင့် တရားစီရင်ရေး စသည့်အာဏာအရပ်ရပ်ကို အစိုးရသစ်ကို လွှဲအပ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပြီး ဗိုလ်ချူပ်ကြီးဟောင်း သိန်းစိန်ဟာ သမ္မတ အဖြစ် ကျမ်းသစ္စာကျိန် ဆိုခဲ့ပါသည်။ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုခဲ့သူ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ဟာ မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း ၈ ဦးမြောက် သမ္မတ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
မန္တလေးတိုင်း ဇဗ္ဗူသီရိမြို့နယ်မှနေ၍ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက် ကြံ့ဖွံ့ပါတီမှ ကိုယ်စားပြု၍ ၀င်ပြိုင်ရာ ဗိုလ်ချူပ်ကြီးဟောင်း သိန်းစိန်ဟာ ၄၀၈ မဲဖြင့် သမ္မတဖြစ်လာကာ ၊ သီဟသူရတင်အောင်မြင့်ဦးက
၁၇၁ မဲဖြင့် ဒုသမ္မတ (၁) အဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဦးစိုင်းမောက်ခမ်းက ၇၅ မဲဖြင့် ဒုသမ္မတ (၂) နေရာကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။အခြား ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမတ်နေရာ များတွင် ဗိုလ်မှူးချုပ်မှ ဗိုလ်ကြီးအထိပါဝင်ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက် ၁၁ဝ ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ၅၆ ဦး၊ တိုင်း/ပြည်နယ် လွှတ်တော် ၂၂၂ ဦး အသီးသီး ဖြစ်သည်။ ကြည်းတပ်မှ ၃၅၃ ဦးဖြင့် အများဆုံးဖြစ်ပြီး ရေတပ်မှ ၁၉ ဦးနှင့် လေတပ်မှ ၁၆ ဦး ပါဝင်ခဲ့သည်။
(၂) ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း သမ္မတ၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်
မြန်မာနိုင်ငံလက်ရှိအစိုးရသစ်၏ သမ္မတသစ် ဦးသိန်းစိန်သည် တနလာင်္နေ့၊ မေလ (၁၆) ရက် ကဆုန်လပြည့် နေ့တွင် ထောင်ဒဏ်ကျခံနေသူ အားလုံးကို ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ် လျှော့ပေးခဲ့သည်။ ထို အမိန့်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ အကျဉ်းထောင်ပေါင်း ၄၂ ခုမှ အကျဉ်းသား ပေါင်း ၁၄၆၀၀ လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဒုတိယအကြီမ်အဖြင့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့တွင် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူများ၊ ကျန်းမာရေး မကောင်းသူများ၊ ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ချို့တဲ့သူများ၊ ထိုက်သင့်သော ပြစ်ဒဏ်ကျခံပြီးသူများ ပြန်လွှတ်ပေးမည် ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။ အကျဉ်းသား ၆,၃၅၉ ဦးကို ထို ကြေငြာချက်ဖြင့် လွှတ်ပေးခဲ့ပြီး ထိုအထဲတွင် ဟာသသရုပ်ဆောင် ကိုဇာဂနာအပါအ၀င် ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား များ အနည်းအကျဉ်းပါဝင်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် စစ်ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တွင် ပါဝင်ခဲ့သော အရာရှိများလည်း လွှတ်ပေးခဲ့သည်။ လားရိူးမြို့ အခြေစိုက် အမှတ် (၂) စစ်ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့မှ တပ်ရင်းမူး ဒုဗိုလ်မှူးကြီး သက်တင်စိန်၊ ဒုတပ်ရင်းမူး မင်းစံကြည်၊ အမှတ် (၉) တပ်ဖွဲ့မှူး ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ထိုက်ရွှေမောင်၊ ကွတ်ခိုင်တပ်ဖွဲ့မှူး ဆန်းနိုင်ထွန်း
တို့ ၅ ဦးသည် မန္တလေးထောင်မှ လွတ်လာပြီး သိန္ဒိတပ်ဆွယ်မှူး တပ်ကြပ်ကြီး စိုင်းအောင်မြင့်၊ တန့်ယန်းဆွယ်မူး တပ်ကြပ်ကြီး ၀င်းနိုင်နှင့် လားရိူးဆွယ်မူး တပ်ကြပ်ကြီး ခင်မောင်ကြီး တို့ ၃ ဦးသည်လည်း လားရိူးထောင်မှ လွတ်လာခဲ့သည်။
(၃) မြစ်စုံစီမံကိန်း ကြီး ရပ်တန့်
မြစ်စုံစီမံကိန်းကြီး စလုပ်စဉ်အခါကပင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အတိုက်အခံများ၊ မီဒီယာများနှင့် ပြည်သူများ ၀ိုင်းဝန်းလတ်မှတ်ထိုးပြီး အစိုးရသစ်ကို တင်ပြခဲ့ကြသည်။သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် ပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်မူကို ထောက်ထားပြီး မြစ်စုံစီမံကိန်းကြီးကို လုပ်ဆောင်နေသော CPI တရုတ်ပိုင်ကုမ္မဏီကို တောင် အသိမပေးတော့ပဲ လွှတ်တော်ကို သ၀ဏ်လွှာ ပေးပို့ပြီး ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။ CPI နှင့် မြန်မာအမှတ်
(၁) လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနတို့ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် နားလည်မှု စာချွန်လွှာရေးထိုးခဲ့ပြီး မတ်လ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်တွင် ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်ရေး သဘောတူညီချက်များပါ နှစ်နိုင်ငံအကြား လတ်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီး မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြီးကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တရုတ်အစိုးရသည် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီး မေခ၊ မေလိခ မြစ်များပေါ်ရှိ ရေကာတာ စီမံကိန်းများအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၂၀ အထိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည်။်ဒီခြေလှမ်းသည် အစိုးရသစ်တက်ပြီးနောက်ပိုင်း ပြည်သူတွေဘက်က ပထမဆုံး ရပ်တည်ခဲ့သော လုပ်ရပ်တစ်ခု အဖြင့် မြန်မာပြည်သူအပေါင်း အံ့သြခြင်းကြီးစွာဖြင့် လက်ခံခဲ့ရသည်။
(၄) NLD ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ပြိုင်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ချက်ချ
နိုဝင်ဘာ (၁၈) ရက်နေ့ ထို အစည်းအဝေးတွင် ဒီမိုကရေစီပါတီများ အပါအ၀င် တက်ရောက်သည့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များမှ NLD ပါတီခွဲ ၁၄ခုက ထောက်ခံမှုအများဆုံးဖြင့် ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။NLD ဗဟိုအဖွဲ့က အစည်းအဝေးတွင် ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ပဲခူး၊ မွန်၊ မန္တလေး၊ မကွေး၊ ဧရာဝတီ၊ စစ်ကိုင်း၊ တနင်္သာရီ စသည့် တိုင်းဒေသကြီးမှ NLD ပါတီခွဲ အဖွဲ့ဝင် ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း ၁၁၇ဦး ဖိတ်ကြားထားပြီး ၁၄ဦးမှာ အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။
၁၉၈၈ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် NLD ပါတီသည် ၁၉၉၀ပြည့်နှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲတွင် လွှတ်တော်အမတ်နေရာ ၄၉၂နေရာအနက် ၃၉၂နေရာ အနိုင်ရရှိခဲ့သော်လည်း နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့-န၀တ စစ် အစိုးရက NLD အား အာဏာလွှဲပြောင်းပေးခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
(၅) ၂၀၁၄ အာဆီယံ ဥက္ကဌ မြန်မာဖြစ်ပြီ
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီကျွန်းတွင် ကျင်းပသည့် ၁၉ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံအား ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန်ပေးရန် သဘောတူကြောင်း ကြေငြာခဲ့သည်။အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲကြီးတွင် အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမား၊ တရုတ် ၀န်ကြီးချုပ် ၀မ်ကျားပေါင်၊ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ယိုရှီဟီကို နိုဒါနှင့် မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တို့သည် အများဆုံး အာရုံစိုက် ခံရသူများဖြစ်ခဲ့သည်။
ထိုသို့ အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန် မြန်မာပြည်သို့ ပေးအပ်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများအား အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးသည် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အပါအ၀င် အစိုးရအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူများ၊ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး အင်းအာစုများနှင့် တွေ့ဆုံလေ့လာခဲ့သည်။မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်က အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရာထူးအတွက် အလှည့်ကျခဲ့သော်လည်း အနောက်နိုင်ငံတို့၏ ဖိအားပေးမှုကြောင့် ထိုအခွင့်အရေးကို လက်လွှတ်ခဲ့သည်။
(၆) အမေရိကန် နိုင်ငံခြားဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန် လာရောက်လည်ပတ်
ထိုသို့လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး တဦး
နှစ်ပေါင်း ၅၆ နှစ် အတွင်း ပထမဆုံး အကြိမ် လာရောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
မစ္စ ဟီလာရီ ကလင်တန်၏ နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်အထိမြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရွှေမန်း၊ အမျိုးသား လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်၊ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်တို့ နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး
ဒီဇင်ဘာ၂ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တွေ့ ဆုံခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့၏ တန်ခိုးကြီးဘုရားတစ်ဆူဖြစ်သော ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးအား ဖူးမျှော်ခဲ့သည်။ မစ္စကလင်တန်က “မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မိတ်ဆွေ ဖြစ်ချင်ပါတယ်၊ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားချင်ပါတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်း ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ထိုက်တန်တဲ့ နေရာတခု ရစေချင်ပါတယ်” ဟု လေးလေးနက်နက်ပြောသွားခဲ့ပါသည်။
(၇) တရုတ်ပြည်မှ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော် အပူဇော်ခံခြင်း
မြန်မာနိင်ငံသို့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော် ကြွရောက်အပူဇော်ခံယူခြင်းမှာ ယခုအကြိမ်နှင့်ဆိုလျှင်
၄ ကြိမ်ရှိသွားပြီဖြစ်သည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံသို့ စွယ်တော်ကြွချီလာပြီး ရန်ကုန်မြို့တွင် ပူဇော်ထားစဉ်က ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီး လူအများအပြား သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရခဲ့သဖြင့် ယခုတကြိမ်တွင် လုံခြုံရေး ကိုပိုမို တင်းကြပ်စွာ ချထားခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်အား နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး စသည့် မြို့ကြီး ၃ မြို့တွင် ၁၆ ရက်စီ အပူဇော်ခံခဲ့သည်။
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ စွယ်တော်တိုက်ဆရာတော်ထံ လွှဲပြောင်းပေးအပ်သည့်အခါတွင် လှူဒါန်းမှုအစုစုမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၉ သန်းကျော် (၃၉၂၂၂၄၄) နှင့်နိုင်ငံတကာသုံးငွေကြေး ၆၂ မျိုး၊ လက်ဝတ်ရတနာမျိုးစုံနှင့် ကျောက်မျက်ရတနာမျိုးစုံ၊ ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် ၂၂၂၉ သန်း (၂၂၂၉၂၀၄၆၀၀ ကျပ်)နှင့် ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော် ထုရန် ကျောက်စိမ်းထည်နှင့်ကျောက်စိမ်းပုလ္လင်တော်စသည်တို့အတွက် ခန့်မှန်းတန်ဖိုးယူရို ၃ ဒသမ ၂ သန်း တန်ဖိုးရှိ ကျောက်စိမ်းတုံး နှစ်တုံးနှင့် ဆင်းတုတော်ထားရှိမည့် ကျောင်းဆောင်၊ ဆင်းတုတော်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ် တို့ကိုပါ လွှဲပြောင်းလှူဒါန်းခဲ့သည်။
(၈) မြ၀တီ - မယ်ဆောက် ချစ်ကြည်ရေးတံတား ပြန်ဖွင့်
ချစ်ကြည်ရေးတံတားကို ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇူလိုင် (၁၈) ရက်နေ့မှစ၍ မြန်မာဘက်က တစ်ဖတ်သတ်ပိတ်ခဲ့ကာ ထိုင်းဘုရင်မွေးနေ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ (၅) ရက်နေ့တွင် ပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ တစ်နှစ်ခွဲကြာအောင် ပိတ်ထားခဲ့သော ချစ်ကြည်ရေးတံတားဖွင့်သောနေ့တွင် နှစ်နိုင်ငံလူကြီးများနှင့်တကွ သတင်းထောက်များစုံလင်စွာ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
ထို ချစ်ကြည်ရေးတံတားဖွင့်ရေး အတွက် ကြိုးစားပမ်းစား နှင့် အနစ်နာခံဆောင်ရွက်ခဲ့သော ကရင်ပြည်နယ် မြ၀တီခရိုင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းဦး မပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက် ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ အစိုးရသစ်၏ ပြည်သူအပေါ်ထားတဲ့ သဘောထား ကို မသိသေးတဲ့ ကုန်သည်ကြီးများအသင်း ဥက္ကဌ ဒေါ်သင်းသင်းမြတ်က ဒီမိုသတင်းထောက်များကို တိတ်တဆိတ် သတင်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်မှာ အလွန်ပဲစိတ်ပျက်ဖွယ်ရာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
(၉) မြန်မာငွေကြေး နှင့် နိုင်ငံတကာ ငွေကြေး တန်းတူညှိ
မြန်မာ့ငွေကြေးသည် လွန်ခဲ့သည့် ၃၆ နှစ်ကတည်းက သတ်မှတ်ထားခဲ့သည့် တစ်ဒေါ်လာ - ၆ ကျပ် နှူန်းကို ပြုပြင်နိုင်ရန်၊ တည်ငြိမ်သည့်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှူန်း ရရှိနိုင်ရန်အတွက် လက်ရှိအစိုးရသစ်က ၁၉၈၇ ခုနှစ်ကတည်းက ၂၄ နှစ်ကြာ ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု ရပ်ဆိုင်းထားသည့် ကမ္ဘာ့ငွေကြေး ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကြီး - IMF ကိုဆက်သွယ်ကာ အကူအညီတောင်းခံခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် IMF အဖွဲ့မှ Mr. Ake Lonnberg ခေါင်းဆောင်သော ငွေကြေးဈေးကွက်နှင့် အရင်းအနှီး ဈေးကွက်ဌာန၊ ဥပဒေဌာနနှင့် အာရှ-ပစိဖိတ်ဌာနတို့ ပါဝင်သော မစ်ရှင်အဖွဲ့သည်
အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့မှ နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ အထိ အစိုးရ အရာရှိများ၊ ဘဏ်များ၊ နိုင်ငံပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေး ကဏ္ဍတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များတို့အားတွေ့ရှိပြီး မြန်မာ့ငွေကြေး ခိုင်မာအောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမူတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ လက်ရှိ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရကို ကမ္ဘာ့ငွေကြေး ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကြီး - IMF ၏ ထုတ်ပြန်ထားသော စည်းကမ်းများကို တသွေမတိမ်းလိုက်နာရမည်ဟု တော့ ကတိက၀တ်များ တောင်းခံခဲ့လေသည်။
(၁၀) အများပြည်သူအတွက် ရည်ရွယ်ကာ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အမိန့် ဥပဒေသများ
၁ . ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်နေ့ မတိုင်မီက နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအငြိမ်းစားတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးအငြိမ်းစားတွေရဲ့ ပင်စင်ခံစားခွင့်ကို လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ အငြိမ်းစားယူပါက ရရှိမယ့် ပင်စင်ခံစားခွင့်အတိုင်း အငြိမ်းစားယူခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးရထူး၊ ချိန်နှုန်းလစာနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ပင်စင်နှုန်းတွေကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လကစပြီး တိုးမြှင့်ခံစားခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရသစ်က ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၃၀ ရက်နေ့တွင် ကြေညာခဲ့သည်။
၂ .အလုပ်သမားတွေ အတွက်ရည်ရွယ်ကာ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်လိုက်သည့် "အလုပ်သမားများ အဖွဲ့အစည်း ဥပဒေ" အတိုင်း အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းနိုင်ပြီး အလုပ်သမားများအနေဖြင့် သပိတ်မှောက်လိုပါက အာဏာပိုင်များသို့ ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ် ကြိုတင်အကြောင်းကြားကာ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် သပိတ်မှောက်မည့်နေ့ရက်၊ နေရာ၊ ပါဝင်မည့်သူဦးရေ၊ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရှင်နှင့် ညှိနှိုင်းဖြန်ဖြေရေး အဖွဲ့သို့ ၁၄ ရက်ကြိုတင်အကြောင်းကြားပါဟု ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သည်။
၃ . ပြည်ပနေနိုင်ငံသားများ အားလုံး ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိပြီ ဖြစ်ကြောင်း
နေပြည်တော် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာနမှ ၂၁.၁၂.၂၀၁၁ ရက်နေ့တွင် တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန် ခဲ့ပြီး အဆိုပါ အခွန်ကင်းလွတ်ခြင်းသည် လာမည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ တရက်နေ့မှ စတင်ကာ အကြုံးဝင်ကြောင်း၊ပုဒ်မ ၅ ၊ပုဒ်မ၇ (ခ) အရ ရရှိသည့် နိုင်ငံခြားငွေအမျိုးအစားနှင့် ပေးဆောင်ရသောဝင်ငွေခွန်ကို ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့သည်။
အထက်ပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာတွေ ကြေငြာသည့်အချိန်တွင် မြန်မာပြည်အနှံ့ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ နိုင်ငံသား တော်တော်များများ သမ္မတကြီး သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေ ဟူသော သာဓု (၃) ကြိမ်ကို အကြိမ်ကြိမ်ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။
(၁၁) ၂၀၁၁ မှာ နာမည်ဆိုးနဲ့ ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခံရသူများ
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချူပ် ဗိုလ်ချူပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ နေရာကို ရရန် ပြိုင်ဆိုင်ရာတွင် စောဒက တက်သည်ဆိုသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဒုတိယ ဗိုလ်ချူပ်ကြီး သူရမြင့်အောင် ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်။
တနသာင်္ရီ တိုင်း ၀န်ကြီးချူပ် ဦးခင်ဇော်သည် တိုင်းအတွင်းထွက်ရှိသော ဆန်များကို အလွဲသုံးစားလုပ်မူကြောင့် ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဦးအောင်သိန်းလင်းသည် လာဘ်ငွေ အကြီးအကျယ်ယူမူဖြင့် ရာထူး မှ ဖယ်ပေးခဲ့ရသည်။
တရားမ၀င် ကားတင်သွင်းမှုများကို အစိုးရက စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိနေချိန်တွင် အေးရှားဝေါလ် ဆိပ်ကမ်းတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသော အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်ရဲထွဋ်မှာ အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ ရုံးတွင် ခွင့်တင်ကာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့သည်။
ပြဿနာမျိူးစုံတက်နေသော် ရဲချူပ်ရာထူးကိုတော့ ရန်ကုန်တိုင်း ဒုတိယတိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်ကျော်ထွန်းကို ပေးကာ ယခုအချိန်ထိ ရဲ အရေးပိုင် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနေဆဲဖြစ်သည်။
Posted by Aung Myint Htun at 10:58 AM